Cologne Carnival Zvino How To Get There | Save A Train
musha > Travel Europe > Cologne Carnival Zvino How To Get There
The Cologne Festival tinenge tichishandira zviripo achiwedzera wako bhakiti mazita. 1.5 Mamirioni anopinda dzinenge gore rega rega, dzinobvumirana! Uyewo sevatsigiri rechishanu-mwaka, ino yakakurumbira mutambo zvirokwazvo kuva muupenyu. The Cologne haradhi hakusi chete kunonakidza asiwo nakisa nyore kusvika nechitima, tichibatsirwa Save A Train Heano mazano dzedu nokuti The Cologne Festival 2019 uye sei kuti ikoko nechitima.
Chii Kuti Rongedzai nokuda Festival Cologne:
Ndiyo nguva kuenda koshitomu kunotenga. Ndiani asingadi kupfeka-up? Wokugadzira iri nani kusiyana carnivals Brazilian. Funga zvimwe "Prussian Musoja" rinorema dose kuti maumbirwe uye sequins!
Cologne Carnival rinopfuura ose mutambo chinoshamisira rokwe, saka shandisa fungidziro yako! The chaipenya nani.
For balls nezvimwe indoor zviitiko, matete zvokupfeka vari inokurudzirwa. Kana uchida zvechokwadi ruzivo mutambo uyu, ipapo unofanira kuenda panze! Chingorangarirai kupfeka chinhu inodziya pasi! Iyo chaiyo Cologne carnival fan haikurudzirwe ne mamiriro okunze! Vaenzi vaya kusvika yapera achawana Masiki, zvokupfeka, uye kuita-up dzakawanda muzvitoro pakati peguta. Sechinhu chokupedzisira, nyore dzvuku bepa mhino ndiko zvose zvaunoda. Want vamwe pfeka Info.
How To Svika Festival Cologne:
Uri kuenda vachida kubata chitima kuenda Cologne raMwari chikuru chiteshi. Uyu mumwe muEurope rinokosha njanji hubs, saka imi musingadi tichirwa kuwana nguva kuti nezvaunokwanisa pamwe SaveATrain.
Unogona kuenda Cologne Festival nokukurumidza uye wakasununguka kubva mumaguta makuru muGermany uye dzimwe nyika dzokuEurope: Mazuva ese, kupfuurisa 1,300 nezvitima vanomhanya pakati Cologne uye dzokugara yose Germany uye kunze. Zvimwe basa zvinosanganisira yemarudzi mukuru-nokukurumidza nezvitima kuti anobatana Cologne pamwe London, Paris, Amsterdam, uye kweBrussels. pamwe soro-nokukurumidza njanji basa kuna muFrankfurt, iyo Koln-Deutz chiteshi chechitima - yechipiri terminal ye yakakwira-kumhanya ICE zvitima muCologne - uye iyo Cologne / Bonn nhandare yendege chiteshi, Cologne ave hunowedzerwazve rayo rinokosha sedare muzinda njanji senga.
The vemo mabhazi webasa Cologne rakapoteredza ndiyewo rakaisvonaka, uine pachivande, chitima, uye bhazi Services kuti achakupa Zvakanyanya Kunaka Panguva Yepamuviri mufambo panguva yako kugara Cologne.
Mashoko atinopiwa nomuranda German Railways Railway kambani zvinosanganisira kwete chete chitima purogiramu, asi unobva chitima uye bhazi purogiramu ndinoiitawo nguva inodiwa kusvika pedyo chemabhazi kana chiteshi netsoka.
Amsterdam kuna Cologne Zvitima
ReRotterdam kuna Cologne Zvitima
Antwerp kuna Cologne Zvitima
Paris kuna Cologne Zvitima
Kölsch remutauro muna Cologne Carnival
Kuti unzwisise “chinoshamisa” Cologne Carnival tsika, uchaita kudzidza mashomanana hwezuva mashoko kubva Kölsch bazi remutauro. Kana vari itsva kwauri, musatanga kukahadzika unyanzvi hwako German – vakawanda veGermany vasingaizivi kana.
Fastelovend, kana: Fasteleer
haradhi, anonziwo “wechishanu Season,” chinobatanidza nzvimbo inokosha yakadai mumwoyo vakawanda Cologne vagari kuti vane mashoko akawanda nokuti. kunyange zvazvo Carnival, kana “Fastelovend,” anonzi kutanga musi November 11 rimwe gore, Chokwadi “mazuva kwazvo” kutanga Ladies’ Husiku, kana “Weiberfastnacht” musi weChina asati uye anomhanya kusvikira pakuvapo Ash Wednesday.
Luxembourg kuna Cologne Zvitima
Liege kuna Cologne Zvitima
Zurich kuna Cologne Zvitima
Geneva kuna Cologne Zvitima
Kölsch: Ndiyo mutauro chete unogona kunwa. Ndicho achimhanya gag muna Cologne, apo bazi remutauro uye rokumusha bika kugoverana zita chete. Kazhinji aishanda akareba, mutete magirazi, panguva Cologne Carnival zviri epurasitiki makapu chete sezvo pasina tyoka rinoonekera kutenderwa mumugwagwa. Unofanira kubata Kölsch vari Brauhaus, Zvisinei, yeuka: Uyai mari. Ndiyo chete nzira kutenga drink matikiti mu yakazara Pubs.
Berlin kuna Cologne Zvitima
MuNuremberg kuna Cologne Zvitima
Bonn kuna Cologne Zvitima
A “Butzcher” chakakura smooch. Paiitwa mabiko Cologne Carnival, kutarisira kuti akamutsvoda (“gebutzt,” kana kuva akarurama: “jebutz”) zvinopfuura zvenguva. yose vatorwa ugovere hakukuvadzi pecks pamusoro vatorwa’ Matama, kunyange vamwe akanyorova Butzcher (mu mureza Kölsch, “Butz”) kunogona smudge Carnival masikirwo zvose pamusoro pechiso chenyu.
Shoko iri rinoreva Vapar, nembariro, kana mumaresitorendi. Vanenge vose kutora chikamu mune vachipemberera Cologne Carnival. Ivo kubvisa fanicha kuumba hombe kutamba uriri nokushongedza zvose rina mavara mavara kwemazuva kupemberera zvitanhatu panhurikidzwa. In Pubs dzakawanda dzomunharaunda, chete Kölsche mumhanzi iri kuridzwa (nziyo Kölsch bazi remutauro). Uchakurumidza vanowanzozviwana kusvika 300-mita refu pamwe nekurutsa pamberi chinyakare Pubs.
Mangwanani, mumigwagwa anozara Cologne Festival mapenzi mu zvokupfeka. At chaizvo 11:11 a.m., mumugwagwa Carnival iri pamutemo rakazaruka meya Cologne uye Cologne raMwari Carnival triumvirate.
Interesting Fact: vakadzi (Women)
mu 1824 muna Beuel, chikamu Bonn, boka rewasherwomen rakaumba yavo Karneval komiti. Zvinoita sokuti vakanga vaneta pakuita mbatya apo munhu wose aiva vachipemberera Karneval. Ivo yaaigara ari Town Hall akatora pamusoro hurumende guta. (Zvino rangarirai ... Karneval ndiyo nguva apo vakuru vakuru vehurumende vari caricatured pachena, uye hurumende kwokunyepedzera akasarudzwa. nhasi, ichi "storming of Beuel Town Hall" vakadzi anoratidzwa vachiramba vachirarama Terevhizheni. Girl Power!
Kurume 1: Carnival Friday
Nhasi chaizvoizvo zuva rokuzorora. kuti asi hatina kutora ichi kuzvikoshesa. Pane zvakawanda yepurogiramu balls kutora nzvimbo manheru pazuva iri. Saka kana uri kuda imwe pati, iwe uchava nechokwadi kuwana mumwe.
Kurume 2: Carnival Mugovera
Mushure Carnival brunch pamwe Kölsch doro, pane kuita panguva bivouac of Carnival nzanga aine uto tsika panguva Neumarkt. Manheru unogona kuenda kuGhost Parade.
Kurume 3: Carnival Sunday
kutangira 11:11 a.m., chikoro uye nharaunda vaipemberera Kurume nepakati peguta, uine mapoka chikoro costumed uye yepakutanga amene unozvishandura kufanorongwa munharaunda netsvimbo.
Kurume 4: Rose Monday
Yakakwirira pfungwa yechirongwa ndiyo guru achimisa musi Rose Monday. The floats dzinotanga achimisa kuburikidza guta 10 a.m. Vatori vechikamu vachiridza kutsvoda kune costumed mapoka lining kwakawanda nzira.
Kurume 5: Carnival Chipiri
Masikati mune vaipemberera namapoka costumed Zvidhakwa napanzvimbo. Mushure maizvozvo, mhemberero kuenda kusvikira pakati pousiku, kana mashanga mufananidzo anonzi "Nubbel" akavigwa kana kupiswa.
Kurume 6: Ash Wednesday
Pamangwanani, VaKaturike enda kuchechi kugamuchira pamuchinjikwa madota pahuma dzavo sechiratidzo chokupfidza. manheru, zvegore Carnival mwaka iri rakagara richidudzirwa akagumisa panguva chisvusvuro hove.
Takakubvumidza iwe kuenda kuCologne Festival 2019, asi? Anobatirira kwenyu chitima matikiti kubva Sava A Train mumaminetsi pasina imwe yekuwedzera, pesky mari! Izvi zvinoreva mari yakawanda ye Weetschaff 🍻
Unoda embed yedu Blog pambiru zviende yako nzvimbo, unogona kana kutora mapikicha edu uye rugwaro uye chete tipei chikwereti ane Link kuti ichi Blog romukova, kana iwe tinya pano: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fcologne-festival%2F%3Flang%3Dsn - (Mupumburu pasi zvishoma kuona Embed Code)
#CologneFestival #koln europetravel mutambo longtrainjourneys trainjourney travelcologne traveltips